Tayada Shiinaha iyo Taleefanka Jumlada Wadajirka ah, USB Hub, HDMI Cable - Teknolojiyada Connexions (Dong Guan) Ltd.
Saxanka Gidaarka Fiilooyinka
Wareegga Wareegga gidaarka
HDMI Saxanka gidaarka
Saxanka Gidaarka Coaxial
Baakadaha Dahaarka leh
Teknolojiyada Connexions (Dongguan) Ltd.oo la aasaasay 2004, waa soo saaraha OEM / ODM soo saare ee fiilooyinka, Wax-ka-beddelka caaga iyo Macaamiisha Elektarooniga. Dhammaan shaqaalaha Connexionsâ € are waxay ka qayb qaadanayaan nidaamka ISO9001 si loo hubiyo macaamiisha leh alaab iyo qiimayaal tayo sare leh oo la isku halleyn karo. Connexions wuxuu xubin ka noqday korsade HDMI ilaa iyo 2010. Alaabtayada sidoo kale waxay u hogaansamaan UL, CUL, ETL CIA / TIA, Rohs / Reach standard. Connexions waxay leedahay in kabadan 50 mashiinno xad-dhaaf ah oo xad-dhaaf ah iyo qalab loogu talagalay isku-dubaridka alaabada macaamiisha & 20 caag ah oo la isku duro, mashiinno wax soo saar ah oo baakadaysan. Mashiinka wax soo saarka ee gaarka ah ka sokow, shirkaddu sidoo kale waxay ku qalabeysan tahay tas-hiilaad imtixaan oo u qalma inay ku sameyso amniga, tijaabooyinka waxqabadka iyo falanqaynta calaamadaha si loo hubiyo tayada sare iyo u hoggaansanaanta heerarka. Dhammaan fiilooyinka ayaa 100% la tijaabiyaa kahor rarka.
Diyaarinta Phono loogu talagalay ujawaab
RG6 Jumper Cable F-Nooc isku xira
Escable Edition 10000mAh Power Bank 30W QC3.0 Lacag Deg Deg ah
2.2mm Fiilooyinka Fibre Optic Audio
USB3.1 Nooca-C Lab ilaa Lab PD Cable
CAT7A Bulk Ethernet Cable, 10G Guri / Bannaanka Dual gaashaan adag Copper S / FTP, 23 AWG 1000ft
CAT6A Patch Cable 10G Xaasid la'aan
CAT6A Bulk Ethernet Cable, Gaashaaman S / FTP, 23AWG Copper Solid, Gudaha.
1080P HDMI Cable HDMI1.4 lab ilaa lab
COAX HDMI Cable Wall Plate
Gawaarida Gawaarida Degdega ah ee otomaatiga ah
2 Saxanka Gang Gang
Fiilooyinka CAT6 Patch Feejignaan-yar oo aan xirnayn
30W PD Charger oo leh 3.0 Feejin Degdeg ah
Bangiga Mini Power 10000mAh
1-Kooxda Budhcad-badeedda Foojarka oo Fiirsaday
10000mAh Power Bank Baxsiga Edition
8 gudaha 1 USB C Hub
COAX HDMI Saxanka gidaarka
HDMI 3RCA Saxanka gidaarka
1-Saxanka gidaarka gaangiska
DVI ilaa HDMI
U soo bandhig HDMI
USB C ilaa hillaaca hillaaca
SPT 2 Silig
Xadhigga SPT-2 Lamp
Xadhigga SPT-1 Lamp
Cinwaanka: Maya. 6, Wadada Shenbao, Magaalada Qishi, Magaalada Dongguan, Gobolka Guangdong
Telefoon: +86 13712346030
Hordhaca qaar ka mid ah fiilooyinka baabuurta2021/04/25
Car Cable-ka waa nooc ka mid ah fiilooyinka / siligga isku xidhka gudaha gaariga, kaas oo loo isticmaali karo gudbinta hadda sida baytariyada, mitirrada, iyo nalalka. Shuruudaha fiilooyinka gawaarida waxay u muuqdaan kuwo u adkaysanaya qabowga iyo heerkulka sare.
Suurtagal ma tahay in lagu xoojiyo Kaamirooyinka bannaanka la socda Solar Panel?2021/04/25
Sidee loo adeegsadaa kaamirada meelaha aan korontada laga helin?
Ma haysaa weydiimahan ku saabsan lacag-bixinta EV?2021/04/24
Waxaa sii kordhaya milkiilayaasha gawaarida korontada. Aynu ka hadalno dhowr su'aalood oo caan ah oo ku saabsan lacag bixinta korantada maanta. Teknolojiyada 'Connexions Technology' waxay bixisaa adeegsiga Guriga la qaadan karo ee loo yaqaan 'EV Charger' oo leh tayo wanaagsan. Ku soo dhowow nala soo xiriir wixii faahfaahin dheeraad ah.
Dejinta nidaam qaabilaadda TV-ga Satelite-ka2021/04/23
Connexions RG6 Jumper Cable F-Type wuxuu ku habboon yahay qeexitaanka sare ee dijitaalka ah ee TV-ga Nidaamka qaata Satelite-ka wuxuu ka kooban yahay isgaarsiin kor u qaadda gudbinta (gudbinta kor u qaadista), jirka xiddigta dayaxgacmeedka (satalayt-qaadka transponder) iyo helitaanka dhulka ( hoos u dhig saldhigga)
Codsiyo kala duwan oo loogu talagalay 50 ohm & 70 ohm Cabirka Coaxial2021/04/22
Teknoolojiyadda Connexions waxay ku takhasustay soo saaridda dhammaan noocyada fiilooyinka Coaxial.Haddaba aan si wadajir ah wax uga baranno codsiyada kala duwan ee 50 Ohm & 70 ohm Coaxial Cables.
Dhibaatada luminta wadnaha2021/04/21
Fiilooyinka Coaxial-ka ayaa si ballaadhan loogu adeegsadaa warshadaha, khasaarahooduna weligoodba way walaac badnaayeen. Inta jeer ee isdaba joogga ah ee xariijinta coaxial-ka la isticmaalo, ayaa sii weynaanaya khasaaraha.
Sidee loogu xiraa kumbuyuutarka Audio?2021/04/20
Maxaa ku jira xirmo qalab maqal ah?
Qalab dhameystiran oo qalabka maqalka ah waxaa ka mid ah makarafoonada, qas, jawaab-bixiyeyaasha jawaab celinta, saameynta, isku barbardhigayaasha, kumbuyuutarrada, kiciyeyaasha, iskutallaabyada, qalabka disiga, iskudhafka, xoojiyeyaasha korontada, kuwa ku hadla sameecadaha waaweyn, ku hadla dheeri ah, Dib uhadlayaasha ku hadla, kormeerayaasha ku hadla, baaska ku hadla.
Hagaajinta guriga oo daciif ah fiilooyinka nidaamka hadda jira2021/04/19
Nolosha guriga ee bulshada casriga ahi waa inaysan ahaanin oo kaliya mid ku habboon oo raaxo leh, laakiin sidoo kale caqli badan, madadaalo leh, oo ammaan ah. Tani waxay u baahan tahay fiilooyin guriga kaamil ah oo daciif ah. Fiilooyinka hadda socda ee daciifka ahi waa "neerfaha" qolka guriga, waxay u gudbiyaan calaamado wareegyo kala duwan aalado kala duwan, si loo gaadho shuruudaha dalabka ee kor ku xusan Nala soo xiriir si aad u heshid tayo sare leh fiilooyinka Coaxial & Fiilooyinka Ethernet.
Maxay tahay inaan fiiro gaar ah u yeelano markaan rakibayno Solar Solar?2021/04/16
Caan ka noqoshada tikniyoolajiyadda qoraxda, qiimaheeda ayaa ku dhowaaday qiimaha iibsiga gaari cusub. Maalmahan, wada-hawlgalayaal badan oo yaryar ayaa ka fikiraya bal in la rakibo baallayaasha ku shaqeeya cadceedda iyo in kale.
Waa maxay hordhaca Phono?2021/04/16
Connexions oo laga aasaasay 2004 Shiinaha, waa soo saare xirfadlayaal ah Audio, Video Cable & Adaptors.Dhallinyarada aan waligood isticmaalin leexashada ka hor waxay filayaan in ujawaabku uun ciyaari doono, ama ugu yaraan si fudud ugu xirmi karo nidaamkooda isteeriyo ee hadda jira ama ku hadla. Waxaa laga yaabaa inaysan sifiican u cadeyn haddii ujawaabyadooda ay la socdaan Phono Preamp iyo in kale.
Sidee loo doortaa fiilooyinka CCTV?2021/04/15
Cable-ka Fiidiyowga: Fiidiyaha fiidiyowga ee loo yaqaan 'SYV75-3' wuxuu si guud u gudbiyaa 200 mitir, 75-5 wuxuu u gudbiyaa 400 mitir, 75-7 wuxuu u gudbin karaa 800 mitir; tayada CCTV Coaxial Cable sidoo kale waa muhiim, RG59U, RG6 RG11 iyo RG11 labaduba waxay ubaahan yahiin udub dhexaad 100% naxaas ah iyo 95% lakab gaashaan leh oo gaashaan ah. Cadaadiska ugu badan ee isku xirka wareegga wareegga kama badnaan karo 15 ohms. Marka masaafada ay ka badato 500 mitir, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo adeegsiga gudbinta fiilooyinka indhaha.
Sidee looga helaa internetka ugu fiican mootadaada?2021/04/15
Helitaanka calaamadda WiFi ee moobilka lagu kalsoonaan karo oo isdaba joog ah badanaa way adkaan kartaa marka aad ku dalxiis gareyso xerada mootada. Xadgudubyada WiFi badanaa way fiican yihiin, laakiin way ku dhibtoon karaan inay ka helaan calaamado adag oo ku filan darbiyada mootadaada mooyee haddii aadan saqafka saarin.
Taxaddarrada ku rakibidda fiilooyinka kamaradaha ilaalinta2021/04/12
Khadka fiidiyowga ee loo yaqaan 'CCTV Video Cable': Khadka fiidiyowga ee loo yaqaan 'SYV75-3 video' wuxuu guud ahaan ku gudbiyaa 200 mitir, 75-5 wuxuu ku gudbiyaa 400 mitir, 75-7 wuxuu gudbin karaa 800 mitir; tayada CCTV Coaxial cable, RG59, RG6, waa in fiiro gaar ah loo yeesho. Labada RG11 iyo RG11 labaduba waxay ubaahanyihiin 100% udub dhexaadka naxaasta iyo 95% lakabka gaashaanida dhexda. Cadaadiska ugu badan ee isku xirka wareegga wareegga kama badnaan karo 15 ohms. Marka masaafada ay ka badato 500 mitir, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo adeegsiga gudbinta fiilooyinka indhaha.
Saamaynta ay xirmooyinka khariidadu ku leedahay nolosha shelf2021/04/11
Maaddaama ay tahay baakad caafimaad oo caadi ah, baakadaha khariiddada ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa dhammaan noocyada baakadaha dawooyinka ee aan qaadno maalin kasta. Marka lagu daro kiniiniyada dawooyinka caadiga ah, suumanka, kaabsoosha iyo wax soo saarka kale ee dawooyinka, sidoo kale waxaa si weyn loogu isticmaalaa cuntada, waxyaabaha la isku qurxiyo, iyo waxyaabaha ay caruurtu ku ciyaaraan.
Qalabka dusha sare ee fiilada gaashaaman2021/04/10
Qalabka birta ah ee loo adeegsaday galka banaanka ayaa u badan birta siligga, silig bir ah, silsilad aluminium ah (aluminium xarkaha silsiladda), iwm.
Muddo intee le'eg ayuu Afhayeenka Cable u noqon karaa Afhayeenkaaga?2021/04/07
Dhererka Kabaha Afhayeenka waa inuu ahaadaa 2m ~ 2.5m, oo u dhaw dhererka wax ku oolka ah, oo waxaa jira xadka u gaar ah. Haddii ay dhaafto 5m, baaxadda codka waa la cidhiidhinayaa, aakhirka iyo xoogga muusiguna wuu yaraan doonaa, taas oo sidoo kale sababaysa qashin aan loo baahnayn.
Farqiga u dhexeeya HDMI iyo DisplayPort2021/04/06
HDMI Cable iyo DisplayPort Cable waxay ku shaqeeyaan isla qaab-dhismeedka aasaasiga ah iyo isku-duubnaanta isku-dhafan ee isku-dhafan, iyo labaduba waxay isticmaalaan calaamado kala duwan oo xawaare sare leh iyo kuwo hooseeya si ay u gudbiyaan xogta, laakiin taasi waa isku ekaanshaha keliya ee u dhexeeya labada.
Waxoogaa aqoon ah oo loogu talagalay Fiilooyinka CCTV2021/04/02
Teknolojiyada 'Connexions Technology' waa soo saare xirfadle ah oo loogu talagalay RG58, RG59, RG6 Coaxial Cable for CCTV Wiring. Waxaan la wadaageynaa waxoogaa aqoon ah oo ku saabsan Waayirada CCTV sida hoos ku xusan. Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad fahanto fiilooyinka loo isticmaalo kormeerka. Kaamirooyinka wax lagu ilaaliyo ee caadiga ahi waxay adeegsadaan: Kabarooyinka fiidiyowga ee CCTV iyo fiilooyinka korantada ee DC. Kaamirada IP-ga waxay isticmaashaa fiilo Ethernet ah, oo si toos ah u socota korantada PoE. Masaafada dheer, kamaradaha ilaalada analogga iyo shabakada labadaba, fiilooyinka indhaha ayaa loobaahanyahay. Waxaan inta badan u isticmaalnaa fiber hal-qaab ah gudbinta masaafada dheer.
Ma jiraan wax su'aalo ah oo dheeraad ah oo ku saabsan Lacag-bixinta EV?2021/04/01
Marka cimiladu kulushahay, haddii aysan jirin meel nasasho ah oo ku wareegsan saldhigga lacag-bixinta, milkiileyaal badan oo baabuur ah ayaa weydiin doona: Baabuurka korontada ku shaqeeya ma lagu shidi karaa qaboojiyaha si uu u nasto inta ay socoto lacag-bixinta? mabda 'ahaan, waxaa lagugula talinayaa in aad dadka ka dallacdo, taas oo ah, marka ay dadku ka baxaan gaariga inta ay socoto lacag-bixinta; tani waxay baabiin kartaa qatarta amaanka ee ka imaan karta isha. Marka labaad, ficilka shidida hawo qaboojiyaha inta uu amraya waxay kordhin doontaa culeyska gudaha ee batteriga waxayna saameyn ku yeelan doontaa nolosha adeegga batteriga.Sidaas darteed, markaad dooranaysid saldhigga dibedda ee bannaanka, iskuday inaad doorato saldhigga lacag-bixinta oo leh musqulo iyo waxyaabo kale tas-hiilaadka lagu dalaco. Marka gaariga gaariga buuxinayo, ka tag gaariga oo aad qolka nasashada si aad u sugto.
Maxay yihiin fiilooyinka nidaamka CATV?2021/03/30
Nidaamka xisaabinta Shabakadda Dhexe ee Nidaamka Fiilooyinka Nidaamka CATV: Habkan waxaa lagu qeexay: dhammaan qeybiyeyaasha laanta dabaqa waxay ku urursan yihiin qolka daciifka ah ee hadda jira, iyo xarigga raadiyaha raadiyaha ayaa si madax-bannaan looga dhejiyay terminal kasta oo isticmaalaha (godka) illaa qolka hadda u dhigma ee daciifka ah Qaybta jiifka ee Coaxial Cable RG6, oo ah habka xisaabinta ee adeegsiga fiilada:
Maxay yihiin faa'iidooyinka Kaamirooyinka Ilaalinta Awoodda Solar Panel?2021/03/29
Maxay yihiin faa'iidooyinka Kaamirooyinka Ilaalinta Awoodda Solar Panel?
Su'aalaha Badbaadada Qoraxda2021/03/26
Miyay Qolalka Solarku u baahan yihiin nadiifin? Qaybaha qoraxda guud ahaan waa is-nadiifin haddii lagu dhejiyo xagal ka badan 15 darajo. Si kastaba ha noqotee waxaa lagula talinayaa in si muuqaal ah loo baaro sanad kasta oo la mayro haddii loo baahdo. Shirkadaha daaqada ka nadiifiya badankood waxay leeyihiin nidaam lagu gaaro oo lagu dhaqo waana inay awoodaan inay nadiifiyaan baararkaaga.
Waa maxay dekedda Thunderbolt 4 ee cusub ee 'MacBook'?2021/03/25
Tan iyo markii loo yaqaan 'Thunderbolt interface' oo si rasmi ah loogu dhawaaqay 2011, heerka gudbinta waxaa laga kordhiyay asalka 10Gb / s ilaa jiilka saddexaad / jiilka 4aad 40Gb / s, iyo qeexida qawaaniinta Thunderbolt 3 ayaa iyaduna noqotay aasaaska faahfaahinta USB4. Thunderbolt 4 waxaa looga dhawaaqay CES sanadka 2020, nooca ugu dambeeya ee qeexitaanka ayaa lasii daayay bishan. Thunderbolt 4 wuxuu si buuxda u waafaqsan yahay qeexitaanka USB4.
Waa maxay USB4-ka cusub?2021/03/24
Labadaba USB 3.1 iyo USB 3.2 ayaa la soo saaray si loo kordhiyo xawaaraha ballaadhinta, himilooyinka naqshadeynta USB4-na wali isma beddelaan. Si kastaba ha noqotee, sii deynta qeexitaankan ayaa sidoo kale ah in la isku daro ecology USB Type-C lana yareeyo jahwareerka isticmaalayaasha dhamaadka.
MacBook interface waali ah baajin, USB-C Hub ayaa ah doorashadaada ugu fiican2021/03/22
MacBook waali baajin interface-USB-C Hub waa xulashadaada wanaagsan
Kee baa fiican? RG59 VS RG6 VS RG11 CableCTC Connexions waxay leedahay waayo-aragnimo 17-sano ah oo ku saabsan soosaarka OEM / ODM ee xargaha Coaxial oo ay ku jiraan RG59 VS RG6 VS RG11 Cables.Letâ try ™ s isku day inaad ogaato Kee fiican, RG59 VS RG6 VS RG11 Cable.Itâ € s ilaa waxa aan u adeegsaneyno.
Waa maxay USB4.0?2021/03/19
Borotokoolka USB4.0 wuxuu nuugi doonaa qawaaniinta Thunderbolt 3 ee horumarka. In la yiraahdo tani waa mahadnaq Microsoft oo ku dhawaaqday ruqsad bilaash ah Thunderbolt 3, taas oo dardar gelisay imaatinka USB4.0.
Sida loogu bilaabo gaariga baabuurta fiilooyinka2021/03/19
Weligaa ma la kulantay xaalad noocaas oo kale ah oo aad isu diyaarinaysay inaad shaqo u aaddo subaxa hore, laakiin aad ogaatay in gaadhigii xalay fiicnaa aanu bilaabi karin? Waxay u badan tahay inuu batterigaagu dhintay ama dhaawacmay. Ha welwelin, maanta waxaan ku bari doonaa farsamo wax ku ool ah. Kadib barashadeeda, waxaad ku bilaabi kartaa gaarigaaga bateriga qof kale.
Fiilooyinka Ilaalinta Fiidiyowga Wiishka2021/03/19
Deegaanka kormeerka rakibida wiishka waa mid gaar ah. Wiishka waa inuu kor iyo hoos u dhaqaajiyaa isagoon istaagin, iyo fiilooyinka rakibida iyo gudbinta kaamirada kormeerka shabakada wiishka sidoo kale waxay leedahay shuruudo gaar ah. Waqtigan xaadirka ah, wiishka sida caadiga ah loo isticmaalo ayaa u heellan gudbinta Ethernet Cable, gudbinta buundada shabakadda wireless.
Su'aalaha CTC Connexions 8 ee 1 USB C Hub Dock2021/03/19
Su'aalaha CTC Connexions 8 ee 1 USB C Hub Dock
Maxay yihiin faa iidooyinka alaabta Ilaalada Solar Panel Solar?2021/03/19
Maxay yihiin faa iidooyinka alaabada Ilaalada Solar Panel Solar Panel kormeerka waxaa lagu dabaqi karaa: Meelaha muhiimka ah ee la socodka amaanka halkaasoo korantadu aysan ku habooneyn magaalooyinka iyo miyiga, kormeerka xaalada wadada weyn, kormeerka goobta dhismaha, kormeerka aaga macdanta, ballaaran- isu gudbinta miisaanka iyo kaabista, kormeerka shabakada korantada muhiimka ah, kormeerka ilaalinta dabka, kormeerka xuduudaha balaaran, kormeerka qalabka dhowrista biyaha, Kormeerka goobaha baaxada weyn ee lagu beero iyo taranka.
Waa maxay onkodku?2021/03/19
Dadka ku cusub laptop-yada ma garanayaan waxa ay yihiin dekedda USB-C, iyo waxa ay tahay Thunderbolt. Waxay kaliya ogyihiin in MACBOOK PRO uu leeyahay dekedda Thunderbolt 3. Si fudud haddii loo dhigo, isku xidhka 'Thunderbolt interface' wuxuu beddel u yahay USB TYPE-C
Waa maxay fiilooyinka danab hooseeya?2021/03/19
Noocyada caadiga ah ee fiilooyinka loo isticmaalo fiilooyinka danab-hooseeya waxaa ka mid ah: Fiilooyinka RJ11 waxaa loo isticmaalaa taleefannada badanaa. CAT5E iyo CAT6 oo loo adeegsaday shabakadaha xogta iyo in lagu qaado calaamadaha maqalka iyo muuqaalka. Fibre optic wuxuu gudbin karaa xaddi badan oo xog ah, fiidiyoow ah, cod ah oo xawaare sare ku socda waxaana si weyn loogu adeegsadaa shabakadaha internetka. RG59, RG6 ama RG11 75 ohm fiilada loo yaqaan 'coaxial cable' ayaa badanaa loo isticmaalaa CCTV, CATV, Satelite TV, iwm.
Maxay yihiin codsiyada guud ee fiilooyinka coaxial?2021/03/11
Kabaha loo yaqaan 'Coaxial cable' ("coax" oo la soo gaabiyo) guud ahaan waxaa loo tixgeliyaa oo keliya in loo isticmaalo fiidiyaha ballaadhan iyo telefishanka telefishanka (CATV) codsiyada guryaha, laakiin goobaha ganacsiga ganacsiga, laga bilaabo telefishanka wareegga xidhan (CCTV), maqalka iyo fiidiyowga ilaa anteenooyinka soo noqnoqda ee raadiyaha, iyo xitaa Xiriirada shabakadaha qaarkood ayaa laga heli karaa. Sidaa darteed, waa mid aad u muhiim ah in la fahmo xariggan xargaha iyo sida loo tijaabiyo.
Waa maxay faraqa u dhexeeya CAT5e CAT6 Cable?2021/03/10
CTC Connexions waa soo saare fiilooyinka shabakadaha, fiilooyinka iyo fiilooyinka coaxial muddo 17 sano ah. "Qeybta 5e" waxaa loola jeedaa Qeybta 5e lammaanaha qalloocan ee aan la xirin. .
Miyay fiilooyinka naxaasta ee CAT lagu beddeli doonaa fiilooyinka indhaha?2021/03/10
Maalmahan, iyada oo ay si isdaba joog ah u soo ifbaxayaan adeegyo cusub sida kumbuyuutar xisaabinta, xog weyn, iyo 5G, cabirka xarumaha xogta ayaa sii ballaaranaya, qaab dhismeedkooda iyo xariggooda ayaa sii adkaanaya. Hoosudhaca tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah iyo qalabka dalabka fiber optic ayaa sidoo kale sii kordhaya. Qiyaasta fiber optic-ka ee xarumaha xogta waaweyni waa ilaa 70%, taas oo aad uga badan tan siligga naxaasta ah. Qaar badan oo ka mid ah xirfadleyaasha labalaabma ee qalloocan ayaa ka walwalsan in xarigga naxaasta gebi ahaanba lagu beddelayo fiber optic.
Maxaan sameynaa haddii bateriga gaarigaaga uu daato? Kaliya soo qaado fiilada kiciyaha degdegga ah.2021/03/09
Maxaan sameynaa haddii bateriga gaarigaaga ka daadanayo Kaliya soo qaado fiilada kiciyaha degdegga ah oo ay la socdaan 12V Power bank.
Cilmi baarista suuqa: Fiilada indhaha ee HDMI ma beddeli doontaa naxaasta jirta ee HDMI?2021/03/09
Cilmi baarista suuqa: Fiilada indhaha ee HDMI ma beddeli doontaa naxaasta jirta ee HDMI? Waa maxay mustaqbalka indhaha HDMI?
Fiilooyinka HDMI badanaa waa la isticmaalaa waana muhiim. Kee baa fiican?2021/03/08
Fiilooyinka HDMI badanaa waa la isticmaalaa waana muhiim. Kee baa fiican?
TV-gaagu sidoo kale ma leeyahay HDMI 2.1 PS5-kaaga?2021/03/08
TV-gaagu sidoo kale ma leeyahay HDMI 2.1 PS5-kaaga? NextGen console-ka cusub ee PlayStation 5 wuxuu ku tiirsan yahay HDMI 2.1 Source
USB Nooca C ilaa HDMI wuxuu keenaa khibrad cusub2021/03/08
Dhawaan, Shirkadda Shatiyeynta ee HDMI waxay si rasmi ah u sii deysay qeexitaanka qaabka beddelaadda HDMI ee loo sameeyay USB Type-C. Dhalashada qaabkani waxay u oggolaaneysaa aaladaha isha ee HDMI-karti inay si toos ah ugu xirmaan muuqaalka HDMI-karti leh iyadoo la adeegsanayo isku xiraha Nooca C-ka, iyada oo aan la helin borotokoollo iyo iskuxirayaal, adapters ama qalabka ilaalinta qalabka, waxaana lagu gudbin karaa hal fiilo Calaamadaha HDMI ee cutubkan, sida Apple's Macbook, ayaa si habsami leh loogu dhajin karaa TV-ga ama kormeeraha.
NHK waxay baahin doontaa ciyaaraha Olombikada Tokyo ee 2021 kanaalka 8K2021/03/07
Shirkadda Japan ee 'NHK' ayaa ku dhawaaqday inay soo bandhigtay kanaalkeedii ugu horreeyay ee TV-ga ah oo ay ku xallisay 8K sanadka 2018. Telefishanka oo baahinaya ilaa 7680 x 4320 pixels ayaa laga bilaabay Japan horraantii Diseembar 2018. Ciyaaraha Olimbikada ee 2021-ka ee Tokyo ee soo socda waxaa si toos ah looga baahin doonaa 8K.
Waa maxay HDMI 2.1?2021/03/06
Waa maxay HDMI 2.1? Maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan heerka 8K HDMI 2.1?
Ma loo baahan yahay in la doorto Dheeriga CMI ee HDMI?2021/03/05
Ma jiro xad cad oo loo yaqaan 'HDMI Cable Length'. Hay'ada HDMI lafteeda ayaa muujineysa in calaamadda HDMI lagu gudbin karo in kabadan 300 oo fuudh.
Mashiinka xawliga ku socda miyuu dhaawacayaa batteriga?2021/03/05
Mashiinka xawliga ku socda miyuu dhaawacayaa batteriga?
Xadhiga Coaxial lama iska indho tiri karo2021/03/05
Tijaabinta fiilada naxaasta ah, waxaan ka wada hadalnay wax badan oo ku saabsan isku-dheellitirnaanta iyo isku-xidhka maaddada naxaasta ee la xidhiidha, sida Qaybta 6 (CAT 6), Qaybta 6 (CAT 6A) iyo Qaybta 8 (CAT 8). In kasta oo kaybalka noocan ah si ballaadhan loogu adeegsado inuu ku taageero gudbinta Ethernet-ka ee codka, xogta, iyo fiidiyaha, macnaheedu maaha inay tahay nooca keliya ee kaabbo naxaas ah oo aad la kulmi karto.
Aqoonta USB TYPE-C2021/03/04
Aqoonta USB TYPE-C
3 qaababka lacag bixinta ee Gawaarida Korantada2021/03/04
3 qaababka lacag bixinta ee Gawaarida Korantada
Hordhaca CAT8 Cable2021/03/04
Haddii aad ku jirtid warshadaha isgaarsiinta shabakadda, waxaan rumeysanahay inaad ogaato qaar ka mid ah fiilooyinka Ethernet, sida Qeybta 5e ee shabakadda, Qeybta 6 ee shabakadda iyo Qeybta 7 ee shabakadda. Laakiin ma ogtahay waxa loo yaqaan 'Cat8 cable network' sideed-nooc ah? Muxuu kaga duwan yahay fiilada shabakadda ee loo yaqaan 'Category 5', Qeybta 6 / Super 6 iyo Khadka shabakadda ee Qeybta 7 / Super 7? Aynu kuula qaadanno inaad ogaato jiilka cusub ee shabakadaha ka booda-Cat8 sideed nooc oo fiilooyinka shabakadda ah.
Solar Panel LED oo loogu talagalay kamaradda WiFi banaanka2021/03/04
Tamarta qorraxda waa isha tamarta cagaaran ee dib loo cusboonaysiin karo, nalalka qoraxda, ha ka welwelin koronto qaali ah, ha ka welwelin inaadan iftiin ku filneyn! Khabiirada quwadda keydinta waxay ku siin karaan lama filaan lama filaan ah!
Bangiyada Awoodda noocee ah ayaa lagu qaadaa diyaaradaha?2021/03/04
CTC Connexions waa soo saare xirfadle ah bangiyada Awoodda la qaadan karo. Bangiyada awooda ma lagu qaadi karaa diyaaradaha? Inta badan Maamulka Qaranka ee Duulista Hawada ee Shiinaha ayaa qeexaya in tamarta la qiimeeyay ay ka yar tahay ama u dhiganta 100W waana lagu qaadi karaa, laakiin lama hubin Haddii bangiga korontada lagu qiimeeyo inuu dhaafo 100Wh laakiin aan ka badnayn 160Wh, waxaa qaadi kara oo keliya ogolaanshaha shirkadda diyaaradaha, laakiin rakaab kasta waa inuusan qaadin wax ka badan laba bangi oo koronto.
Waa maxay interface-ka HDMI? Sidee loo doortaa fiilada HDMI?2021/03/03
Waa maxay interface-ka HDMI? Sidee loo doortaa fiilada HDMI?
Waa maxay Coaxial Cable?2021/03/03
Waa maxay Coaxial Cable? Waa maxay RG59 RG6 RG11?
Sidee loo doortaa labo xargo oo Ethernet Cable ah oo ku jira mashruuc rakibidda kamarad ilaalin shabakadeed ah?2021/03/03
Xaaladdaha adeegsiga iyo farqiga u dhexeeya Coaxial Cable & Ethernet Cable.2021/03/03
Waa maxay farqiga u dhexeeya HDMI2.1 iyo HDMI2.0?2021/03/03
Xilligan, HDMI 2.0 waxay ku guuleysan kartaa sawirrada 4K 60 FPS ama 8K sawirro ah 30 FPS. HDMI 2.1 cusub wuxuu soo bandhigi karaa sawirada 4K ee 120 FPS ah ama 8K oo ah 60 FPS, xitaa wuxuu taageeri karaa muujinta xalka 10K.
Farqiga u dhexeeya Apple danabka interface iyo USB Type C2021/03/03
USB-C wuxuu u taagan yahay USB Type C, oo ah kordhinta heerka caadiga ah ee loo isticmaalo USB. Astaamaha is-dhexgalka cusubi waa mid yar oo fiican, iyadoo aan loo eegin jihada togan iyo tan taban, ee dadnimo ka badan. Aragti ahaan, nooca C waxaa loo isticmaali karaa basaska USB 2.0 iyo 3.0, laakiin hadda soo saarayaasha waxay u egyihiin inay isticmaalaan Nooca C jiilka cusub ee qeexaya gudbinta USB3.1.
Soo qaado Jumper Cable iyo bangi awood leh oo kaa caawin kara inaad bilowdo mashiinka baabuurka marka lagu jiro xaalad degdeg ah2021/03/03
Mararka qaar waxaad ubaahantahay uun bood boodbood iyo bangi tamarta inta aadan mashiinka gaariga bilaabi karin
Aqoonsi Cable CCTV ah2021/03/03
Xadhigga Coaxial ee aan la iska indhatirin2021/03/03
Interface USB3.1 iyo Nooca-C2021/03/03
USB Type-C (USB-C soo gaabin), wuxuu leeyahay cabir cusub oo dhexdhexaad ah iyo magac yara qabow, waa wax aad u fudud in saaxiibo maqla eraygan ay u maleeyaan in kani yahay heer USB cusub, laakiin maahan . Nooca-C waa qeyb kaliya oo ka mid ah heerka USB 3.1, maahan heer cusub.
Suuqa TESLA EV ee 2020 Baahida xeedho ee EV ayaa sii kordheysa2021/03/03
Suuqa TESLA EV ee 2020EV Charger baahida ayaa sii kordheysa
Su'aalaha ku saabsan CTC Connexions CCTV Cable2021/03/03
Aqoonsiga fiilada I2021/03/03
Aqoonsiga Kabaha II2021/03/03
Xulashada xargaha ee dhammaan noocyada mashaariicda fiilooyinka
Dulmarka guud ee xargaha2021/03/03
Fiilooyinka coaxial waxay u adeegsadaan silig naxaas adag sida udub dhexaadka iyo lakabka walxaha dahaarka leh. Lakabkan qalabka maaddada dahaarka leh waxaa ku wareegsan qaboojiye mesh cufan leh, oo shabaquna wuxuu ku daboolan yahay lakab ka mid ah maaddada ilaalinta. Waxaa jira laba fiilooyin si ballaaran loo isticmaalo. Mid waa xadhig 50-ohm ah, oo loo adeegsado gudbinta dhijitaalka, sidoo kale waxaa loo yaqaan 'baseband coaxial cable' maxaa yeelay badanaa waxaa loo isticmaalaa gudbinta baseband; kan kalena waa fiilo 75-ohm ah, oo loo adeegsado gudbinta analogga, taas oo ah xarig-ballac ballaadhan oo lagu wada hadlo qaybta xigta. Farqigaas waxaa sabab u ah sababo taariikheed, ee ma ahan sababo farsamo ama soosaarayaal.
Sidee loo doortaa fiilada codka?2021/03/03
Masaafada gudbinta ee CABLES kala duwan ee Ilaalinta Video2021/03/03
8K Teknolojiyad Cusub: 8K HDMI2.1 Waxyaabaha iyo Wadaagista Qorshaha2021/03/03
Isku xirka fiidiyowga ugu caansan ee 8K waa HDMI2.1. Waxyaabaha soo socdaa waa sharaxaad kooban oo ku saabsan qaabka, qaabka gudbinta, shaqada DSC iyo shaqada HDR oo ay taageerayaan HDMI2.1.
Ku soo dallacidda bangiga Power-ka wax ma u dhimi doonaa taleefanka? Runta ayaa joogta2021/03/03
Ku soo dallacidda bangiga Power-ka wax ma u dhimi doonaa taleefanka? Runtu way jirtaa - Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Hordhac dhowr fiilooyin ah oo caan ku ah ilaalinta iyo amniga2021/02/04
Sidee loo doortaa CAT6 ama CAT5E ee PoE Switch?2021/01/29
Waa maxay farqiga u dhexeeya CAT5E iyo CAT6 ee dhismayaasha caqliga badan2021/01/28
Lacag ku sii EV ï¼ˆ ‰ vehicle vehicle vehicle vehicle - - - - - - - - We We We We We We We We We We Waxaan caddaynaynaa su'aalaha muhiimka ah2021/01/22
Gawaarida korontada waxay ku sii kordheysaa Shiinaha, Yurub, USA & degmooyin kale, EV Charger waa mid ka mid ah qalabka ugu muhiimsan ee aan u baahanahay.